Location: musha » Kutumira » Bhizinesi Kufamba » Vatungamiri veSkal Asia Vanogamuchirwa paChiso nechiso muBangkok
Vatungamiri veSkal Asia Vanogamuchirwa paChiso nechiso muBangkok
Mutungamiri weSkal Asia Andrew J. Wood anogashira cheni yake - mufananidzo nerubatsiro rweSkal Bangkok Club
Nekufamba pakati peIndia neThailand kuvhurwa uye kuvharirwa vanhu vasingachadiwi kune vafambi vakabaiwa zvizere, Mutungamiriri weSkal Asia Andrew J. Wood (anoonekwa wechitatu kurudyi pamufananidzo) pamwe neMutungamiriri weAsia Yakapfuura Jason Samuel (anoonekwa wechitatu kuruboshwe pamufananidzo) vese. kugamuchirwa nemufaro kumusangano wekutanga wakatarisana we Bangkok club kubva munaKurume gore rino.
Jason akange auya nendege kubva kuMumbai kuti apinde mumusangano akatora mukana uyu kupa cheni yakasvitswa nemaoko akamirira Asian Area kuna Mutungamiri Andrew avo vakasarudzwa munaGunyana 2021. The COVID-yakanonoka cheni mharidzo yakaitika nguva pfupi yadarika paMay networking cocktail. chiitiko, chakarongwa neSkal International Bangkok paPeninsula Hotel. Zvakare anoonekwa pamufananidzo kubva kuBangkok kirabhu, ndiPhotoi Visutriratana Zviitiko Director (anoonekwa kure kuruboshwe pamufananidzo), James Thurlby Mutungamiri (ona wechipiri kuruboshwe pamufananidzo), Michael Bamberg Secretary (anoonekwa wechipiri kurudyi pamufananidzo) naJohn Neutze. Treasurer (inoonekwa kure kurudyi mumufananidzo).
Skal ndiro rega boka repasi rose rinobatanidza mapazi ese eindasitiri yekufambisa uye yekushanya.
Skal International isangano rehunyanzvi revatungamiriri vekushanya pasi rose. Yakavambwa muna 1934, Skal International mumiriri wekushanya kwepasirese nerunyararo uye isangano risingaite purofiti. Skal haina rusarura pahwaro hwebonde, zera, rudzi, chitendero, kana zvematongerwo enyika. Skal yakatarisana nekuita bhizinesi uye bhizinesi network mukambani yevamwe vashandi mumamiriro ehushamwari. Chikwata chekutanga chakatangwa muna 1932 muParis nevatungamiriri vekufamba, vachitevera rwendo rwedzidzo rweScandinavia, nenhamba inokura yemakirabhu, Sangano rakazoumbwa makore maviri gare gare. Skal toast inosimudzira Mufaro, Utano Hwakanaka, Ushamwari, uye Hupenyu Hurefu.
Skal International nhasi ine nhengo dzinosvika 13,000 mumakirabhu mazana matatu nemakumi matatu nenomwe munyika 317 dzine muzinda kuGeneral Secretariat muTorremolinos, Spain.
Dzimwe nhau nezve Skal
Varwere veMelanoma vanogona kudzivirira kuvhiyiwa kusingakoshi ...